लोकप्रिय गायक कुलेन्द्र विश्वकर्माले किन गाएनन् एउटा पनि तीज गीत ?, यस्तो छ जवाफ | दर्पण दैनिक
लोकप्रिय गायक कुलेन्द्र विश्वकर्माले किन गाएनन् एउटा पनि तीज गीत ?, यस्तो छ जवाफ
प्रकाशित मिति: २०७८ श्रावण २२ गते ०४:४१
पर्वत जिल्लामा जन्मिएका कुलेन्द्र विश्वकर्मा लोकप्रिय कलाकार हुन । उनले दर्जनौं सफल लोक तथा दोहोरी गीतहरुमा आफ्नो जादुमय स्वर दिईसकेका छन । निकै लामो समय संघर्ष गरेका विश्वकर्माले गाएको ‘सालको पातको टपरी हुने’ गीतले नेपाली लोक दोहोरीको क्षेत्रमा इतिहास नै रच्न सफल भएको छ । नेपाली लोक संगितको क्षेत्रमा मौलिकताको कुरा उठिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा लोक दोहोरी गायक कुलेन्द्र विश्वकर्मासँग दर्पण दैनिकका संवाददाता चन्द्रकुमार बिश्वकर्माले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो समय के कसरी दैनिकी विताइरहनु भएको छ ?
पछिल्लो समय पनि यो कोभिड १९ को सङ्क्रमण उतिकै फैलिएको कारण र गीत संगित बाट टाढा जान न सक्ने भएकोले घरमै बसि नयाँ गित संगितको सिर्जना गर्दै समय मिलाएर स्टुडियोमा पनि नयाँ गितहरु गाउदै यसरि नै बिताइरहेको छु ।
कोरोना र लकडाउनले कलाकारहरु लाई कस्तो प्रभाव पार्यो ?
यसमा अरु क्षेत्रमा जस्तै हामी कलाकारहरु लाई पनि धेरै ठुलो असर पुर्याएको छ । किनभने चाँडपर्व नजिकिदै गर्दा देश तथा बिदेशमा मेला महोत्सवहरु हुन्थे । मेला महोत्सवमा कलाकारहरु को माग हुन्थ्यो । पछिल्लो समय कलाकार बाँच्ने बलियो आधार मेला महोत्सब नै बनेको थियो। तर यो कोभिडको कारण यति बेला मेला महोत्सवहरु पनि भएका छैनन् जताततै बन्द र डर त्रास मात्रै फैलिएको छ ।
यसले कलाकारहरु लाई आर्थिक हिसाबमा पनि कठिनाइ पर्दै गएको छ भने। हजारौं दर्शक श्रोताहरु सँग रमाउने कलाकार हरु घरमै थुनिएर बस्नु पर्दा झन् अर्को समस्या भएको छ ।जताततै बन्द छ । कोभिडको कारण दिनकै दुःखद घटना पनि घटेका छन । यसबाट कलाकार हरु पनि अछुतो छैनन् त्यसकारण कोभिडले कलाकार हरुमा पनि ठुलै असर पारेको छ ।
तपाईं मौलिकतामा जोड दिने गायक आज भोलि तीजका गीतहरु बजारमा सार्वजनिक भइरहेका तीज गीत विवादित पनि भइरहेका छन, यसमा तपाईंको धारण के छ ?
यस विषयमा म धेरै बोल्दिन किनभने यस विषयमा म भन्दा धेरै अध्यन अनुसन्धान गर्नु भएको अग्रज ब्याक्तित्वहरु ले बोलिरहनु भएको छ । म के मात्रै भन्छु भने मौलिकता माथि नै प्रहार गर्नु भनेको आफ्नो आमा माथि छुरा प्रहार गरेजति कै हो, किनभने मौलिक लोक गीत संगित भनेको त धरातल हाम्रो देशको परिचय सभ्यता हो नि ।
आफु चर्चामा आउन कै लागि मौलिकतालाई भुल्नु दुःखद कुरा हो, किनभने आज हामिले मौलिकतालाई बिर्सन थाल्यौं भने पछि आउने पुस्ता ले के सिक्छ्न ? त्यसकारण यसले राम्रो सन्देश दिदैं दिदैन । यति मात्रै हैन मौलिक लोक गीत संगितमा जीवन सुम्पेका कलाकारहरु लाई समेत यसले ठुलो असर गरेको छ। मेरो एउटै मात्रै अनुरोध छ– चर्चामा आउनका लागि यस्तो कार्य नगर्नु, मेहनत गर्दा टिक्न सकिन्छ, बिकृति ल्याएर टिक्न सकिदैन ।
तपाईले चाँहि तीज गीत किन गाउनु भएन ?
यस मा यस्तो छ मैले अघघिनै मौलिकताको कुरा गरि सकेनि किन भने एउटा भनाइ नै छ नि हिन्दु नारिहरु को महान पर्ब हरि तालिका तीज भनेर भन्छौ नि त्यसकारण तीजका भाकाहरु मा हामीले महिलाहरु लाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ, भन्ने मेरो धारण छ । त्यसकारण सकेसम्म तीजका गीतहरु महिला ले नै गाउदा राम्रो भनेर नै मैले न गाएको हो ।
हुन त आज भोलि पुरुषले पनि धेरै गाउनु हुन्छ । यसको अर्थ पुरुषले गाउनै हुदैन भनेर विरोध गरेको हैन, गाउन हुन्छ तर पुरुषको पनि भुमिका हुनै पर्छ लय शब्द सिर्जना गर्न लगायत अन्य कार्य मा सहयोग गर्नु पुरुष कर्तव्य पनि हो । तर आवाज चाँ िनदिइ नहुने गित भए मात्रै दिंदा राम्रो जस्तैः दिदी भाइका दुःख–सुख साटासाट गर्ने खालका दाजु बहिनीहरु को भावानालाई समेटिएका गीत हरुमा पुरुषले गाउदा झन सुनमा सुगन्ध हुन्छ, भन्ने मेरो विचार हो ।
तर आज भोली पुरुषले नै जस्तोसुकै गित लाई नि तिज गित को नाम दिएर गाउने चल्न पछिल्लो समय आएको छ । यो चलनबाट म पछि हटेको मात्रै हो, किनभने पहिला महिला हरुले नै बढी नाचगान गर्ने रमाउने गरेका थिए । मेरो यस्तो बुझाइ भएर नै मैले तीजका भाका नगाएको को हुँ । अफर नै न आएको भने हैन र मैले तीजका भाका हरु नगाउनुको ठुलो कारण त्यस्तो केहि छैन ।
कोरोनाका कारण भेट्न नपाएका तपाईंका शुभचिन्तक दर्शक श्रोता लाई के भनु हुन्छ ?
मलाई माया गर्नु हुने मेरा भगवान रुपी दर्शक श्रोतालाई म पनि भेटनलाई आतुर छु । यो माहामारिको समय सुरक्षित बस्नुहोस तपाईंहरु ले माया गरिदिनु भएको छ र नै म कलाकार भएर बाचेको छु । तपाईंहरुले दिनु भएको माया अरु केहि दिएर पनि तिर्न सक्दिन तर गीत संगित बाट भने अवश्य नै तिर्नेछु ।
यहाँको भाबि योजना के छ ?
तेस्तो खास योजना नै त कै छैन किनभने सबै कुराको बाधक नै कोभिड भएको छ, तर पनि एउटा कलाकारको जिन्दगी कलाका क्षेत्रमा नै बिताउने भएको भएर नयाँ गीत संगितहरु गर्दै छु । दर्शक श्रोतालाई मनोरञ्जन दिने कोसिस गर्दै छु । अब छिटै नयाँ गीतहरु आउदै छ्न । मेरा अरु गीत लाई जस्तै माया गरि दिनु हुनेछ भने ठुलो आश राखेको छु ।